तपाईंको वेबसाईट ट्राफिकलाई लक्षित गर्ने तरिकाहरू | Martech Zone
तपाईंको वेबसाईट ट्राफिकलाई लक्षित गर्ने तरिकाहरू
मंगलवार, नोभेम्बर 8, 2011 Douglas Karr
हामी मार्टेकमा नयाँ थिमको हाम्रो मोबाइल र आईप्याड संस्करणको अनुकूलनमा पछाडि छौं ... यो काममा छ, यद्यपि! एउटा कुरा तपाई हुनेछ सूचना त्यो हो, पोष्टको वर्गीकरणमा आधारित, हामी पृष्ठ मा बिभिन्न विज्ञापन छन्। हामीले हाम्रो आफ्नै गतिशील विजेटहरू अनुकूलित गरेर र यसलाई प्रयोग गरेर यो गर्‍यौं आईसकेट विज्ञापनको सेल्फ सर्विस प्लेसमेन्टको लागि।
त्यहाँ तपाइँका श्रोताहरूलाई लक्षित गर्ने धेरै अरू तरिकाहरू छन् जुन उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको उपकरण भन्दा पनि, र मोनेटेटबाट यस इन्फोग्राफिकले उनीहरूलाई बोल्दछ। भर्खरको औसत अर्डर आकार, स्थान, भ्रमण फ्रिक्वेन्सी, अपरेटि। प्रणाली, मौसम, उत्पादनहरू वा हेरिएको पृष्ठहरू र तपाईंको पूर्ति केन्द्र (वा अफिस स्थान) को दूरी पनि अनुभवलाई अनुकूलित गर्न र प्रतिक्रिया दरहरू बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
देखि इंफोग्राफ़क: रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्न ग्राहक क्षेत्र द्वारा वेबसाइट ट्राफिकलाई लक्षित गर्दा आज डिजिटल मार्केटरहरूको २ 25% मात्र गरिन्छ। थोरै लक्ष्यीकरण जान्ने तरिकाको साथ, मार्केटरहरूले प्रत्येक आगन्तुकको लागि एक वेबसाइट अनुभव अनुकूलित गर्न सुरु गर्न सक्दछ। लक्ष्यीकरणले अधिक रूपान्तरणको परिणामस्वरूप अधिक कुशल, व्यक्तिगत-अनुरूप अनलाइन शपिंग अनुभव सिर्जना गरेर उपभोक्ताहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
तपाई द्वारा ल्याइएको: मोनेट - एक डिजिटल मार्केटि platform प्लेटफर्म तपाईले व्यक्तिगत उत्पादन पिचहरू, सन्देशहरू, र सुविधाहरू, कहिँ पनि, कुनै पनि पृष्ठमा, त्यो पृष्ठ हेरिरहने आगन्तुकको बारेमा तपाईंलाई थाहा भएको सबै कुराको आधारमा परीक्षण गर्न र प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: व्यवहार लक्ष्यीकरणgeotargetingखरीद ईतिहासलक्ष्यीकरणमौसम लक्ष्यीकरण
कसले तिमीलाई पछाडि रोकेको छ?
छुट्टीको मौसमका लागि उत्तम अभ्यासहरू ईमेल गर्नुहोस्
हाम्रो इन्फोग्राफिक साझा गर्न को लागी धन्यवाद, डगलस! साँच्चै यसको कदर गर्नुहोस्।